ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »6သင့်ပြီးခဲ့သည့်ဖြစ်ခြင်းမှပထမဦးဆုံးနေ့စွဲကာကွယ်တားဆီးဖို့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 22 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ပထမဦးစွာရက်စွဲများ. ကျနော်တို့စိတ်အားထက်သန်စွာအမှော်အချိန်လေးမျှော်လင့်. သူတို့ကပါးနိုင်ပါသည်, သို့သော်လည်းခြိမ်းခြောက်. နညျးလမျးမြားစှာအတွက်, သူတို့အလုပ်အင်တာဗျူး၏ညီမျှနေ. ဒါကြောင့် Ace, နှင့်သင်အနာဂတ် perks ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, မက်လုံးပေး, နှင့်နောက်ဆုံးတွင်မြှင့်တင်ရေး. (ထိုအရဲ့ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲ "စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့" မျှော်လင့်ကြကုန်အံ့။)
သို့သော်ငြားလည်း, မှားခါးပန်းကို၎င်းဝတ်ဆင်, awkwardly communicate, သို့မဟုတ်အခြေခံလူမှုကျေးဇူးတော်၌ချို့တဲ့ခံရဖို့ပေါ်လာ, နှင့်သင်ရှေ့ကိုရွှေ့ဖို့နောက်ကျောကိုခေါ်ခံရမေ့လျော့နိုင်.
ထိုအရဲ့ကရင်ဆိုင်နေကြကုန်အံ့: ယှဉ်ပြိုင်မှုနှစ်ခုလုံး Arena ၌ပြင်းစွာသောအစေနိုင်ပါတယ်.
ဒီမှာပါ6သငျသညျသမြှသော-အရေးကြီးသောပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအတွက် "စံ Operating လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ" အဖြစ်ချမှတ်ရန်လိုခငျြပါလိမ့်မယ်အလေ့အကျင့်.
အချိန်ပေါ်မှာရှိ. အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်. ထုပ်ပိုးမှုအောက်တွင်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါ. အဘယ်အရာကိုမျှနေတဲ့ဖုန်းကိုအစာစားနေစဉ်အတွင်းအဆက်မပြတ်ပယ်သွားပါရှိခြင်းထက်ပိုမိုနှောင့်အယှက်သို့မဟုတ်စိတ်ပျက်စရာနိုင်ပါတယ်. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှဖုန်းခေါ်ယူရမယ်လိုလျှင်, (ကအရေးကြီးပါတယ်ကြောင့်) ဒါကြောင့်အတိုချုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစား– တောင်းပန်ခြင်းနှင့်အတူ.
"သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးစိတ်စွဲမှတ်စေတဲ့ဒုတိယအခွင့်အလမ်းရဖို့ဘယ်တော့မှမ။ က" ကိုသတိရပါ
အခြားသူတဦးအားသိမ့်အတွက်တက်ကြွစွာစိတ်ဝင်စားမှုကိုယူ. သင်ဖြစ်ကြပြီးသင်သည်အဘယ်သို့ခံစားသင်သည်သီးခြားစွာသင်သောအကြောင်းအရာတစုံတခုသို့မဟုတ်နှစ်ခု Share. င်ရောက်မေးခွန်းများမေးရှောင်ကြဉ်ပါ.
အတိတ်အကြောင်းကို rant မထားပါနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမအောင်မြင်, အစက်အပြောက်ပြက်လုံးတွေပြက်ပယ်ပြောပြ, သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရိုင်းစိုင်းပြုမူ. ၎င်းသည်သင့်အားသင် uncouth အဖြစ်ဖြတ်ပြီးလာစေနိုင်.
သင်ကသိခဲ့ပါ 93% ဆက်သွယ်ရေး၏ Non-နှုတ်ဖြစ်အောင်ဆို?
ကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်တူသောအရာတို့ကို, မျက်ရိပ်မျက်အသုံးအနှုန်းများ, သင့်ရဲ့နေ့စွဲစေ့စပ်နှင့်စိတ်ဝင်စားပါကမျက်လုံးချင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ် positioning ကိုသင်အကဲဖြတ်ရန်ကိုကူညီနိုင်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကသူတို့အရေအတွက်ကဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်မျှော်လင့်. နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုနာ.
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်အချစ်ဇာတ်လမ်း လာ. ရှေ့တော်၌ဘယ်တော့မှမပေးသင့်. စျေးနှုန်းသက်သာစွာလူအများစုကတစ်ဦးကိုအတိအကျအလှည့်-off မှာဖြစ်ပါတယ်. သင်ငွေသားဆိုရင်စိန်ခေါ်, ဖန်တီးမှုဖြစ်; ဖယောင်းတိုင်ထွန်းနှင့်တေးဂီတဖြင့်အရသာအိမ်ပြန်ချက်ပြုတ်မုန့်ညက်ကိုစဉ်းစား.
သနားတျောမူပါ. သင်သည်ကောင်းသောအချိန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်ပြော. EXIT စတင်အဖြစ်နည်းတူအရေးကြီးလှသည်.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် vs. partner လက်ဆောင်များ – သင်ကားအဘယ်သူသနားတော်မူမည်?
သင့်အွန်လိုင်း Social Profiles တို့၏ဆက်ဆံရေးငှာနေကြ?